BITTORRENT MA Ọ BỤ UTORRENT: NKE KA MMA - UTORRENT - 2019
Xlive.dll bụ ọbá akwụkwọ nke na-enye mmekọrịta nke Online Games Games maka Windows - LIVE na egwuregwu kọmputa. Karịsịa, nke a bụ ịmepụta akụkọ egwuregwu nke onye ọkpụkpọ, yana ndekọ nke ntọala egwuregwu niile na echekwa echekwa. A na-etinye ya n'ime usoro ahụ mgbe echichi nke ngwa ahịa nke ọrụ a. O nwere ike ime na mgbe ị malitere egwuregwu ndị metụtara LIVE, usoro ahụ ga-eme ka njehie efu efu Xlive.dll. Nke a ga-ekwe omume n'ihi mgbọrọgwụ antivirus nke faịlụ oria ma ọ bụ ọbụna enweghị ya na sistemụ arụmọrụ (OS). N'ihi ya, egwuregwu ahụ na-agba ọsọ.
Nchọpụta nsogbu Xlive.dll
E nwere ngwọta atọ maka nsogbu a, nke ga-eji ọrụ pụrụ iche, regharịa Games For Windows - LIVE na nbudata onwe gị.
Ejiri ịba uru iji mee ka usoro DLLs rụọ ọrụ.
Gaa usoro ihe omume ahụ ma pịnye site na keyboard "Xlive.dll" na ebe nyocha.
Na windo na-esote anyị na-emepụta nhọpụta nke mbipụta ọbá akwụkwọ ahụ. Ọtụtụ mgbe, ọtụtụ n'ime ha nwere ọtụtụ, ha dị iche na ibe ha ma dabere na bitness, ụbọchị ịhapụ. N'ọnọdụ anyị, nsonaazụ gosipụtara nanị otu faịlụ, nke anyị na-ede.
Ọzọ, hapụ ihe niile agbanweghi ma pịa "Wụnye".
Usoro 2: Wụnye Games maka Windows - LIVE
Oge na - esote ma n'otu oge ahụ dị irè bụ iji dozie ngwa Games maka Windows - LIVE. Maka nke a, ịchọrọ ibudata ya na weebụsaịtị Microsoft.
Wepu Egwuregwu maka Windows site na akwukwọ ọrụ
Na ibe ebudata, pịa bọtịnụ ahụ "Download".
Kwunye nwụnye site na ịpị abụọ "Gfwlivesetup.exe".
Nke a mezighara usoro.
Usoro 3: Download Xlive.dll
Ihe ngwọta ọzọ maka nsogbu ahụ bụ ibudata ọbá akwụkwọ site na ebe nrụọrụ weebụ na Ịntanetị ma na-edegharị ya na nchekwa dị na ya:
Enwere ike ime nke a na usoro dị mfe na ụkpụrụ ahụ "Dọrọ na-dobe".
Ejiri usoro ndị a iji dozie nsogbu ahụ na njehie Xlive.dll. N'ọnọdụ ebe nchịkọta dị mfe na usoro adịghị enyere aka, a na-atụ aro ka ị gụọ ozi dị na isiokwu ndị na-esonụ banyere usoro maka ịwụnye DLL na ndebanye aha ya na OS.
Otu esi esi wụnye DLL na Windows
Deba aha DLL na Windows OS